[SAP ERP ọhụrụ]
SAP ERP ọhụrụ
SAP ERP ọhụrụ ngwọta, ntụziaka, na nkọwa
SAP GUI Ntuziaka ntuziaka onye ọrụ
SAP FICO Ego na ịchịkwa
SAP MM Ihe Master
SAP LSMW Na-eme ka Migration Migration Mgbanwe
SAP ma ọ bụ ịzụta ihe
SAP SD Sales na nkesa
SAP n'ihu nkwụnye ngwụcha na ohere IDES SAP maka omume - SAP S / 4 HANA training
SAP ma ọ bụ ịzụta ihe : Kedu ihe ịchọta usoro ndụ ndụ maka ịzụta ọrụ?
SAP GUI Ntuziaka ntuziaka onye ọrụ : Kedu ka esi agbanwe paswọọdụ na SAP?
SAP FICO Ego na ịchịkwa : Mechie oge mgbasa ozi na azụmahịa SAP FI OB52
SAP MM Ihe Master : SAP MM nyocha ajụjụ - na azịza ha
SAP PM Project management : SAP mmejuputa usoro
SAP SD Sales na nkesa : Otu esi emepụta usoro ahịa na SAP S / 4 HANA
SAP LSMW Na-eme ka Migration Migration Mgbanwe : SAP bubatara mbubata ntinye ntinye nke LSMW
SAP logon : Mepụta usoro SAP GUI ọhụrụ
Ònye ka anyị bụ
Anyị bụ ndị ọkachamara SAP ERP. Anyị na-enyere ndị ọrụ aka na-arụ ọrụ mmemme SAP zuru ụwa ọnụ, na-eme mgbanwe n'etiti ọdịbendị dị iche iche, specialties, streams, and technologies. Anyị na-enwe ọganihu n'ịmepụta, rụọ ọrụ, imezi, ịmepụta ihe, na ịmepụta ngwọta, iji mejuo ndị ahịa. Anyị kere www.newsaperp.com ịkekọrịta ọrụ anyị. Anyị na-arụ ọrụ ihe karịrị afọ 10 n'ịzụ ahịa azụmahịa ụwa, izu zuru ụwa ọnụ zuru oke, njikwa ego, na ọrụ SAP ERP arụ ọrụ. Anyị mere mgbanwe mgbanwe azụmahịa na ọrụ dịgasị iche iche, dịka nchịkọta akụrụngwa, ihe ịchọ mma, ngwaahịa ahịa, nlekọta mara mma, ma ọ bụ ejiji, n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa.
SAP GUI ọzụzụ - SAP S / 4 HANA training
International SAP and Weebụ consulting
Copyright © 2019 SAP ERP ọhụrụ. All rights reserved.